"Dia hahazo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny hianao, koa hijoro tsara ary tsy hatahotra" - Jao 11: 15.
Ny ilaintsika dia fahalalana hampahatanjaka ny saina amam-panahy, izay hahatonga antsika ho lehilahy sy vehivavy tsara kokoa. Ny fanabeazana ny fo dia manan-danja lavitra noho ny fianarana avy amin'ny boky fotsiny. Tsara, ary tena ilaina aza, ny mahalala ny momba ny tontolo izay iainantsika. Hanao fahadisoana goavana tsy ho haintsika harenina anefa isika raha avelantsika ivelan'ny fisainantsika ny mandrakizay (...) Raha mahatakatra ny fahalemen'ny tenany ny tanora, dia ho tsapany fa ao amin'Andriamanitra ny heriny. — MH, 449,450
Misy siansa izay tokony hofehezin'ny Kristianina - dia siansa izay lalina kokoa, mivelatra kokoa ary ambony kokoa noho izay mety ho siansan'olombelona, toy ny fahambonian'ny lanitra miohatra amin'ny tany. Tokony hotezaina ny saina, hobeazina, hofanina. Nantsoina mantsy isika mba hanatanteraka ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fomba izay tsy mifanaraka amin'ny fironana maha-olombelona. Tsy maintsy resena ny fironana nolovaina sy nokolokoloina ho amin'ny ratsy. Mazana dia tsy maintsy afoy ny fanabeazana sy fanofanana izay noraisin'ny olona iray nandritra ny fiainany manontolo, mba ho tonga mpianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy izy. Tsy maintsy beazina mba hiorina ao amin'Andriamanitra ny fontsika. Antsoina isika mba hifankazatra amin'ny fisainana izay hahafahantsika manohitra ny fakam-panahy. Tsy maintsy mianatra ny mibanjina ny zavatra any ambony isika. Tokony ho takatsika ny fiantraikan'ny foto-kevitry ny Tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro - dia ireo foto-kevitra izay ambony toy ny fahambonian'ny lanitra, ary maharitra mandrakizay. Tokony hifanaraka amin'izany foto-kevitra izany ny asa sy ny teny ary ny hevitra rehetra. Tokony hampifanarahina amin'ny sitrapon' i Kristy sy hampileferina eo anatrehany ny zavatra rehetra. — MH, 453,454.